GIM International Daabacaadii koowaad ee Isbaanish - Geofumadas
Mee, 2014 Geospatial - GIS, tabo cusub
Iyadoo farxad aad u weyn ay tahay in aan ku duubo faraha aniga oo ah daabacaadii koowaad ee Isbaanishka ee majaladda "GIM International", taas oo sannado badan ay noqdeen tixraac muhiim ah dhexdhexaad ah.
Tani waa waxa Durk Haarsma uu ku leeyahay tifaftirka soo dhaweynta,
Dunida Isbanishka ku hadla waa mid kala duwan, laf ahaanteeda, caqabado iyo fursado isku mid ah iyo si siman horumarka, sidoo kale dhinaca gogosha. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan la kulmay akhristayaal badan oo ka socda labada Latin America iyo Spain, kuwaas oo ii sheegay in ay jiri doonto dalab weyn oo loogu talagalay majaladdooda. Hagaag, halkan waa!
Taasi waa sida aan hadda u heli doono majaladda in la daabaco saddex jeer sannadkii, iyada oo maqaalo badan oo kala duwan laga soo qaatay gobolkeena iyo qaybaha kale ee adduunka.
Daabacaaddani koowaad waxay keenaysaa waraysi xiiso leh Rodrigo Barriga Vargas, oo ah madaxweynaha hadda ee Machadka Pan American Institute of History, oo ku salaysan Mexico. Rodrigo waxa uu safar ku tagayaa siddeed su'aalood oo ku saabsan mawduuca isbedelka Latin America ee isticmaalka geoinformation. Waxa uu ka hadlayaa muhiimada iyo doorka PAO, tusaalooyin muhiim ah oo gobolka ka mid ah, horumarinta Cadastre iyo caqabadaha loogu talagalay SDI dhexdeeda qaab-dhismeedka SIRGAS, GeoSUR iyo UN-GGIM.
Arrimaha kale ee ay ka mid yihiin, waxay soo jiitaan dareen:
Meeleynta GNSS. Tani waa maqaal waxbarasho by Mathias Lemmens kuwaas oo ku siin kara macnaha in taageere kasta oo GPS ayaa laga badiyay ee dunta si cusub, si ay u fahmaan taariikhda uu hogaaminayo boos caalamiga ah tan iyo markii la sii daayo hore oo kale GPS muuqasho 1982, 2020 in ay leeyihiin afar qalabka marka nidaamka GNSS buuxda u hawlgalo la gaarsiiyo caalamka.
Isticmaalka Drones si loo qiyaaso mugga miinooyinka furan. Tani waa waayo-aragnimo ah ee Chile ee anigaa iska SPDE Chuquicamata, oo uu sharaxayaa sida ka faa'iidaysanaya units maamulka gacanta ku images 266 duulimaadka loo samayn karo in ka yar hal saac iyo badh diyaarad si 250 mitir sare isticmaalaya Pix4D ku softwarw. Waxa xiiso leh in xaqiiqda la escanner a jidhadhka dhulka (TLS) ayaa loo baahan yahay lahaa baahida loo qabo in si ay u helaan yaamayska, maalmood 2 ee dalka, extrapolation in ay curiyaan model ah digital iyo helitaanka xogta si maalmood 4 gudahood. ka baro indha la 'ee qasabka ah laga reebo, oo isticmaalaya baabuur badan, ka shaqeeya iyo natiijada dhamaadka Dhawa khilaafeen in 1% ah.
On the UAVs theme isla, Lomme Devriendt ballaarinaya maqaal kale oo uu ka hadlayaa-xawaaraha hooseeyo drones micro, taasoo duuli at Joogga ah 70 mitir, oo daboolaya ku dhowaad hektar 29 saacadiiba.
Waxaa weli u hambalyeeyo Sokeeyaha GIM Caalamiga ah ee mashruucan si ay u our macnaha, dhiiri Akhristeyaasheena keliya ma aha ee goobidda iyo share, laakiin sidoo kale soo jeedin mowduucyo daabacid, maxaa yeelay, in our macnaha waxaa jira maal badan ee waayo-aragnimo iyo si ay u wadaagaan aqoonta dunida.
Hadda, sug ilaa dhammaadka Juun, marka daabacaadda labaad la yimaado. Sure waxa ay noqon doontaa mid aad u xiiso badan, laakiin waa intaas oo dhan, luqadeena!
Si aad u ogaatid, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad raacdo GIM International International on Twitter.
Ogow Geomares, guriga daabacaadda.
Post Previous«Previous Khariidadaha Bulshada ee Magaalada, daabacaad xiiso leh
Post Next Top 40 Geospatial TwitterNext »